A na - edozi nkọwa mbu nke usoro obibi obibi Ọjọọ na Netflix | Akụkọ akụrụngwa
Nkọwa mbu nke usoro Netflix Resident Evil na-agbapụ
Paco L Gutierrez | | Ihe nkiri na usoro, General, Videogames
Ná mmalite nke afọ 2019, magazin a ma ama n'ịntanetị n'obi imecha Ana m ekpughe nke ahụ Netflix na-arụ ọrụ na usoro Resident Evil, egwu saga nke vidiyo egwuregwu ibu Capcom. Ọ bụ otu n'ime aha ama ama ama ama n'ụwa nke egwuregwu vidio, kere na 1996 ya na egwuregwu vidio mbụ ya maka Sony Playstation mbụ, erewo nde mmadụ 90 nde gafee nyiwe niile ruo taa.
Netflix ugbu a emebeghị ụdị nkwupụta ọkwa ọ bụla, mana synopsis nke usoro a leaked site "mberede", ya mere emeziri ya na ọdịnaya di na anyị nwere ike ịhụ ya n'ime izu ole na ole ma ọ bụ ụbọchị ole na ole, bụ ihe na-emekarị n'ọnọdụ ndị a. Anyị abụghị mmadụ ole na ole na-eche akụkọ a dịka mmiri May mgbe ụtọ ma n'otu oge ahụ egwu usoro nke ihe nkiri nke Paul WS Anderson, anyị nwere olile anya tụmadị ihe anyị hụrụ nso nso a na usoro nke onye amoosu 'The Witcher'.
1 Synopsis Leaked site Netflix
1.1 Ozi na ụbọchị ịhapụ:
1.2 Achọpụtara usoro ihe Ọjọọ E Bipụtara na 2017
Synopsis Leaked site Netflix
Nchịkọta ọdịnaya onye Jawmuncher choputara Tọgharia, na Netflix mediacenter. Ọrụ ahụ zaghachiri site na iwepu ọdịnaya ahụ ozugbo nchapu ahụ pụtara. O doro anya na akụkọ ahụ ga-anwa ịkwado onwe ya na ihe ndị mere na akụkọ egwuregwu vidiyo; ndị protagonists ga-ahụ maka ịchọpụta Kedu ihe ụlọ ọrụ umbrella na-ere ọgwụ?, mepụtara site na nje T (Virus Tirant).
“Obodo Celarfield, MD (Maryland), anọwo na-anọ ogologo oge n’okpuru ndò atọ yiri ka ha enweghị mmekọ: Umlọ ọrụ Umbrella, Psylọ Ọrịa Uche nke Greenwood kagburu na obodo Washington DC. Ugbu a, afọ iri abụọ na isii mgbe nchọpụta nke Virus T, a ga-amalite ikpughe ihe nzuzo atọ ndị ahụ zoro ezo na ihe ịrịba ama mbụ nke ntiwapụ.
Ihe omuma a na-etinye na ya dabara na ozi nke usoro imecha. Onye na-ajụ mmụọ ahụ ekwuola na mbụ ya Netflix bu n'obi ichoputa usoro nke ulo oru UmbrellaKedu ka o si bụrụ na n'agbanyeghị na ọ gbasaa nje na-egbu obodo dum, ọ gara n'ihu na-enweta ike. E wezụga ya mara na ụlọ ọrụ mmepụta ihe Constantin Nkiri na-esonye na mmepụta nke usoro telivishọn ugbu a, ya mere, ihe niile dabara ma ọ bụrụ na anyị gbakwunye ya n'eziokwu na anyị kwuru n'isiokwu a.
Ozi na ụbọchị ịhapụ:
N'oge a enweghị ozi ọ bụla na ụbọchị nke ọ ga-ekwe omume premiere, ebe ọ bụ na nchapu ahụ n'agbanyeghị na ọ sitere na Netflix n'onwe ya etinyeghị ụbọchị. Ihe niile na-egosi na a ga-ebupụta usoro a n'afọ a 2020, na-eji ohere ndọpụ nke egwuregwu vidiyo ọzọ na saga ga-enye. Bi Ọjọọ 3 Remake a ga-ahapụ na Eprel 3 na ọ ga-abụ a phenomenal ọkà okwu maka ma usoro onwe ya na Netflix, nke na nke a ga-eme ka ọtụtụ Fans nke saga na-akwụ ụgwọ maka ọrụ dị nnọọ ịhụ usoro.
Achọpụtara usoro ihe Ọjọọ E Bipụtara na 2017
Na ihe niile a, ekwesịrị ịdeba ama na ọ dịlarị mgbalị gara aga iji mepụta usoro nke saga a, kagbuo Resident Evil TV series. Onye nduzi onwe ya Shawn Lebert na Mance Media kwupụtara afọ ole na ole gara aga na ha na-arụ ọrụ na nke a oru ngo a na-akpọ Arklay, aha ugwu ebe ulo obibi di ebe akuko banyere egwuregwu mbu nke aha.
Akụkọ a sochiri onye nchọpụta aha ya bụ James Reinhardt bụ onye nyochaworo ọtụtụ igbu ọchụ na Raccoon City; O sina dị, ihe ọmụmụ ahụ anọgideghị na ọrụ ahụ. Na ihe ngosi nke echiche, echiche niile banyere aha ụjọ ewepụla na vidiyo, mana ọ ka nwere otu ọnọdụ ikuku site na saga. A ihere mere, na pilot isi kwuru ụzọ, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na Nke a abụghị mmefu ego dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ihe nkiri na usoro » Nkọwa mbu nke usoro Netflix Resident Evil na-agbapụ
Kedu Samsung Galaxy S20 ịzụta. Anyị na-atụle ụdị atọ ahụ
Samsung Galaxy Buds +, otu karama dị iche iche e ji mara